Arrinta Somaliland – UPD – Midowga Nabadda & Horumarka
Mowqifka Xisbiga UPD waa in midnimada Soomaaliya ay muqaddas tahay, cad/qeyb ka tirsan gayiga Soomaaliyana aan laga tanaasuli karin. Sidaas oo ay tahay, Xisbiga UPD wuxuu rumeysan yahay in si dhab ah, oo qumaati ah loo abbaaro arrinta Somaliland. Xisbiga UPD wuxuu qabaa in wadahadal toos ah lala galo walaalaha Somaliland, iyadoo loo kala saarayo mid ku beegan muddada soke, iyo mid ku beegan muddada fog:
Wadahadalka muddada soke, wuxuu ku saleysnaanayaa qodobbada soo socda;
Ixtiraam, isku dhimrin iyo walaaltinimo Soomaaliyeed
In laga garaabto dhibaatadii Gobollada Waqooyi Galbeed laga gaystay, dabayaaqadii siddeetameeyadii, laguna sameeyay magaca dowladdii Soomaaliyeed
In la garowsado, lana soo dhaweeyo horumarka lagu naalloon karo oo ay Somaliland gaartay 27-kii sano ee lasoo dhaafay, gaar ahaan xagga amniga, kala dambeynta, maammulka, dimoqraadiyadda iyo wadar-oggolka bulshada
In la garowsado hanaqaadka dowladnimo ee heerka federaalka iyo heerka dowlad-goboleedyada laga gaaray sanadihii lasoo dhaafay
In lagu heshiiyo in kala aragti duwaanaanshaha jira lagu dhammeeyo wadahadal, is-qancin iyo isku tanaasul, meeshana laga saaro xoog iyo colaad
In lasii xoojiyo siyaasadda Dowladda Dhexe ee ah inaan marnaba la hor istaagin deeqaha caalamku ay siiyo Somaliland, la iskana kaashado
In muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool gobollada hoos yimaadda Somaliland loo fududeeyo adeegyada aasaasiga ah ee ay u baahan yihiin, sida: baasaboorrada iyo aqoonsiyada kale, tasdiiqinta shahaadooyinka, arrimaha kale ee la xiriira waxbarashada iyo caafimaadka
In la wadaago maamulka hawada iyo badaha Soomaaliya, dakhliga kasoo xaroodana si lagu heshiiyay loo qaybsado.
In la fasoxo isku socodka Soomaalida, lana xoojiyo ganacsiga, iskaashiga waxbarashada, caafimaadka, isboortiga, fanka, IWM.
Wadahadallaada muddada fog waxay ku saleysanaanayaa qodobbadan:
Qaabka loo wadaagi karo dowladnimada (confederal, federal, IWM)
Awood qaybsiga dalka
Dhulalki ay dowladdii Soomaaliya laheyd, iyo sida loo maareynayo
Arrimaha kale ee masiiriga ah